Ezigbo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, unu niile na-ekwu okwu na baajị "maka ndị kwere nkwa" | Ilblogdellafede
Ezigbo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, unu niile na-akparịta ụka ma pụọ ​​iche "maka ndị kwere nkwa"
Kọrọ unu akụkọ:
“Anyị nọ n’oge ntụli aka, ọtụtụ ndị na-eto eto na-enweghị ike ịchọta ọrụ ma ọ bụ enyemaka n'ọnọdụ ụfọdụ nwere njikọ, na-arịọ maka enyemaka site n'aka onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị nso na ntuli aka ma a na-eme otu puku nkwa. O doro anya na ebumnuche onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ bụ ịnara ntuli aka nke ezinụlọ ahụ ma nwaa idobe onwe ya n'oche ya. ”
Ọbụlagodi na anyị kwuru "ekwughi ekwu" ma ọ bụ "ọ bụghị eziokwu" nke akụkọ ndị a na heretali anyị na-anụ ọtụtụ. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na-akwalite, ha chọrọ ntuli aka, ha chọrọ oche ma hapụ ụtọ ọjọọ n'ọnụ. Mgbe ụfọdụ, ha na-enyere aka ma ọ bụ naanị ndị na-enweta ezigbo nloghachi bụ naanị ezumike.
Ezigbo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, unu niile bụcha onye okwu. Ndị mmadụ na-abịakwute gị, rịọ maka enyemaka, mana ọrụ ebere anaghị adị na mpaghara gị, naanị ị hụrụ ike na ego n'anya.
Ndi isi obodo, ndị kansụl, ndị kansụl, ụmụ nwanyị, ị na-eme m ọchị. Also nwekwara ụlọ ọrụ ebe ị na-anabata ndị mmadụ, ndị ogbenye nọ na mkpa, iduhie na imezu nkwa na-enweghị isi. Ihere megbuo gị!!!
N'ime mpempe akwụkwọ a achọghị m itinye uche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama ọ bụ na nwata nwoke ahụ rịọrọ maka enyemaka.
Ezigbo enyi m “enyochala ike gị? Chosen họrọla ihe masịrị gị, nwee ọzụzụ ma mekwaa agụụ agụụ ọrụ? You zụpụtala atụmatụ ị gwa onye ọchụnta ego ruo n'ókè nke na ọ nwere ike itinye ego n'ọrụ gị?
Ndi m hụrụ n’anya, egbula oge na ịchụ ndị na - abaghị uru na nkwa kama na-ewepụ ike na ume gị niile ma chọọ ụzọ ziri ezi. Ozugbo ịchọta, ọ nweghị onye ga-egbochi gị.
Mgbe ị noro n’ụzọ ziri ezi na oge ntuli aka onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abịakwute gị, ị nwere ike ịsị "mba, anaghị m votu, ị na-ekwu naanị okwu na baajị". Yabụ na ị ga - abụrịrị ndị nwoke na - akwụghị ụgwọ ma n'ezie na n'ụlọ ntuli aka na - enye ndị tozuru oke ntuli aka na ọ bụghị ndị na - eduhie ndị mmadụ.
Mee ka ndụ gị sie ike na ikike gị ma ghara imebi onye ọ bụla. Gbalịsie ike na klas ndọrọ ndọrọ ọchịchị adịghị mkpa karịa ọgwụ ma ọ bụ ọrụ aka ọzọ. Ekwela ka ndi okacha amara duhie gi.
Gị ndị chọrọ ikike gị ugbu a na enweghị nkwekọrịta nwere ike ịtụfu ihe ọjọọ nke ọha "ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ndụ" site na ịme ohere maka ndị na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị ka ọ bụrụ otu.
Nke Paolo Tescione dere
Ihe edepụtaraIhe odide Paolo
← Na post gara aga Gara aga post:Mee ụdị obiọma na-enweghị atụ, hụ ihu Chineke
Ọzọ Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa n'ụzọ ọ bụla nke nwere nnukwu ebumnuche ịtụkwasị obi na Jizọs